एनआरएनए यूके बैठक : लेखा, अनुशासन, विधान संशोधन समिति गठनसहित विभिन्न निर्णय - Bishwo Sandesh - Bishwo Sandesh
एनआरएनए यूके बैठक : लेखा, अनुशासन, विधान संशोधन समिति गठनसहित विभिन्न निर्णय
१५ भाद्र २०७७, सोमबार २१:३४
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ ( एनआरएनए ) यूकेको प्रत्यक्ष कार्यसमिति बैठक सम्पन्न भएको छ । एनआरएनए यूके अध्यक्ष पुनम गुरुङको अध्यक्षतामा कार्यसमिति बैठक सम्पन्न भएको हो ।
लकडाउनका कारण करिब ६ महिनापछि बसेको बैठकमा कार्यसमिति तथा आइसीसी सदस्य लगायत करिब दुई दर्जनको सहभागिता थियो ।
महासचिव फडिन्द्र भट्टराईका अनुसार, बैठकमा कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र रोकामगरले आम्दानी खर्च विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले अब त्रैमासिक रुपमा आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघलाई च्यारिटीमा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा उपाध्यक्ष सुनिलबाबु खडकाले संयोजन गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । त्यसैगरि, संघसंस्था प्रतिनिधि बैठक (काउन्सिल बैठक) समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईलाई दिइएको छ । तर, उक्त बैठक परिस्थिति सहज भएपछि हुनेछ ।
साथै बैठकले अल्डरसटमा बन्न लागेको पहिलो गोर्खा भिसीको सालिक स्थापनार्थ सहयोग गर्न उपाध्यक्ष सुनिल खड्कालाई सहयोग संकलन गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
बैठकले विधान संशोधन समिति पनि गठन गरेको छ । उक्त समितिमा नारायण कंडेल संयोजक र सदस्यहरु सरस्वती केसी, डा. रामकुमार अधिकारी, रामशरण सिम्खडा, दयानिधि सापकोटा, महेश गुरुङ एवं सदस्य सचिवमा नारायण गाउंलेको नाम प्रस्तावसहित अनुमोदन गरिएको छ ।
उता, बैठकले अनुशासन समिति गठन गरेको छ । जुन समितिको संयोजकमा संघका संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र कंडेलसहित ५ सदस्य रहनेछन् ।
महासचिव भट्टराईका अनुसार बैठकले विधानमा प्रावधान भए अनुसार ५ सदस्यीय लेखा समिति समेत गठन गरेको छ । समितिमा कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र रोकामगर, शेरबहादुर सुनार, एलएन घिमिरे, दीपक गुरुङ र शर्मिला हिराचन थकाली छन् ।
बैठकले गत कार्यकालको आर्थिक प्रतिवेदनमाथि जांचबुझ गर्न एउटा समिति पनि गठन गरेको छ । गत जनवरी १९ को कार्यसमिति बैठकको निर्णय समेतलाई आधार मान्दै स्वतन्त्र जांचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको संघले जनाएको छ ।
उक्त समिति एलएन पाण्डे, बुद्धि गुरुङ र डा. मुकुन्द बास्तोला गरि तीन सदस्यीय छ । उक्त समितिले ४ साताभित्र जांचबुझ प्रतिवेदन कार्यसमितिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरि समयसीमा निर्धारण गरिएको महासचिव भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रकाशित | १५ भाद्र २०७७, सोमबार २१:३४
अफगानिस्तानद्वारा अष्ट्रेलियालाई २०८ रनको लक्ष्य